ရေမွှေး(Perfume) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ရေမွှေး(Perfume)
- si tone
Posted by si tone on Aug 22, 2012 in Arts & Humanities, Celebrity, Creative Writing, Drama, Essays.., Entertainment, Photography, Style & Beauty | 43 comments
Si Tone ပြောတဲ့ ရေမွှေးအကြောင်းပါ
Si tone က စာရေးဆရာလဲမဟုတ်ပါဘူး………………………………
ဒီရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရေမွှေးနဲ့ ပက်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ Si Tone ပြောပြပါ့မယ်
အရင်ဦးဆုံး ရေမွှေး ရွေးချယ်နည်းကိုပြောပြမယ်……… ရေမွှေး ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတော့
ယောင်္ကျားလေးတွေဆိုရင် အနံ့ပြင်းပြင်းတွေ အနံ့သင်းသင်းတွေ မရွေးပဲ အနံ့မပြင်းတပြင်း အနံ့မသင်းတသင်းကို ရွေးချယ်သင့်တယ်………… Si Tone အထင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေ
အားလုံးက ရေမွှေးကို ၁၀၀% မှာ ၅၀% လောက်ပဲ အသုံးပြုတယ်ထင်တယ်……. တချို့ယောင်္ကျားလေးတွေ ရေမွှေးကိုတော့ သိပ်မသုံးကြဘူး…. ဂျိုင်းလိမ်တဲ့ ( Roll on) ကိုပဲအသုံးပြုကြတာများတယ်…… တကယ်လို့
ယောင်္ကျားလေးတွေ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို ကိုယုံကြည် လောက်တဲ့အထိရေမွှေးကိုတော့ အသုံးပြုသင့်တယ်……… Si Tone အထင် ယောင်္ကျားလေးတွေလဲ အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ထင်တယ်….
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိန်ကလေးတွေနဲယောင်္ကျားလေးတွေ ချစ်သူရည်စားဖြစ်ပြီဆိုရင် မိန်ကလေးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရေမွှေးသုံးဆွဲတဲ ယောင်္ကျားလေးတွေကို အမြဲတမ်း သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ တပ်တူထိုးသလိုပဲ
အဓိကအချက် နဲ့ ရှောင်ရန်အချက် = (ယောင်္ကျားလေးနဲ့မိန်ကလေး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားရင် ဘယ်တော့မှ
လိမ့်မယ်နော်…. ) 
အင်း…………………… ဒီတစ်ခါမိန်ကလေးတွေကတော့ ရေမွှေးကို အနံ့ပြင်းပြင်းတွေ မသုံးသင့်ဘူး….
မိန်ကလေးတစ်ယောက် အနံ့ပြင်းပြင်းတာသုံးလိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့စရိုက်က ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အနံ့ရတဲ့သူက
ဆုံးဖြတ်သွားတက်တယ်….. ရေမွှေးအနံ့တစ်ခုအတွက် အင်မတန် ရုပ်ရင့်သွားနိုင်တယ်………..
အင်း… တစ်ချို့ မိန်ကလေးတွေကျတော့ အနံ့သင်းသင်းလေးတွေသုံးရင် ၁၅မိနစ်နေရင် အနံ့ပျယ်သွားတယ်
ဆိုပြီး အနံ့ပြင်းပြင်းလေးတွေသုံးကြတယ်… တကယ်တော့အဲဒါကမှားတာပဲ…. အသုံးပြုတာမှားတာပဲ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆ်ိုတော့ ရေမွှေးကို သုံးမယ် စွတ်မယ်ဆိုရင် “ လက်ကောက်ဝတ်နားက အကြောနဲ့ လည်ပင်နားက အကြောကို စွတ်သင့်တယ်…..” ပြီးမှအင်္ကျီ ပေါ်ကိုစွတ်ရတာ…….. ဒါပေမဲ့ လူ့ အသားပေါ်ကို
တော့ရေမွှေး သိပ်မတင်ပါနဲ့ အသားကင်ဆာဖြစ်တက်ပါတယ်……. အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် တခါတလေးမှ အသုံးပြုတာကောင်းပါတယ် စွတ်ရမယ့် အချိန်က “ Dating time, Important time, Job time, Nightclub time..” တို့ပဲ အဒီအချိန်တွေမှာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်………. ရေမွှေးအနံ့သင်းသင်းလေးတွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အဲလိုအသုံးပြုသင့်တယ်လို့ Si Tone ထင်ပါတယ်……… အနံ့ပြင်းပြင်းတွေကို သုံးမယ်ဆိုရင်
အင်္ကျီရဲ့ ပခုံးတဖက်တချက်ကို ရေမွှေးတစ်ချက်ပဲ စွတ်သင့်တယ်…….. တချို့မိန်ကလေးတွေက ရေမွှေး ကိုကြိုက်ကြတော့ သူတို့အ်ိမ်မှာရေမွှေးတွေရှိတက်ပါတယ်…… တကယ်လို့ အနံ့စမ်းစမ်းလေးတွေလိုချင်ရင်
အနံ့သင်းသင်းလေး နှစ်ခုကို ရောစွတ်ကြည့်ပါ…. ဒီလိုပဲ အနံ့အပြင်းနဲ အနံ့သင်းတဲ့ဟာကိုလဲ ရောစွတ်ကြည့်ပါ…..
စမ်းသစ်တဲ့ အနံ့လေး တစ်ခုရရှိလိမ့်မယ်…….
သတိပေးချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ရန် အချက်= “ရေမွှေးဝယ်မယ်ဆိုရင် အနံ့ကိုစမ်းသုံးလိုရမှ ၀ယ်ပါ
စမ်းခွင့်မပေးရင် မ၀ယ်ပါနဲ့……. ပြီးရင်….. ရေမွှေး
ပုလင်းလှလိုဆိုပြီး မ၀ယ်ပါနဲ့ အနံ့ကိုစမ်းရှူးပြီးမှဝယ် ပါ……” 
ကယ်….. Si Tone လဲ ရေမွှေးအကြောင်းကို သိတလောက် မြင်တလောက် ပြောပြပြီးပြီ……
ဒီရေမွှေး အကြောင်းကို Si Tone ရေးထားတာပါ….. ရွာထဲက ဖတ်တဲ့သူတိုင်းလဲ အားပေးကြပါနော်…
ပြီတော့ ကျေးဇူပြုပြီး အကဲခပ်ပေးကြပါနော်……………………
ဒီရေမွှေးက နာမည်ကြီးအဆိုတော် britney spears ရဲ့ေ၇မွှေး ပါ
ဒီရေမွှေးက Paris Hilton ရဲ့ရေမွှေးပါ
ဒါက နာမည်ကြီး justin bieber ရဲရေမွှေးပါ
ဒါက Jennifer Lopez ရဲ. ရေမွှေးပါ….
Si Tone တင်တဲ့ ရေမွှေးလေးတွေ သဘောကျမယ်လိုထင်ပာတယ်………………
About si tone
si tone has written 19 post in this Website..
View all posts by si tone →
သဘောကျတယ်ဗျို့  ! ဗဟုသုတ တိုးတာပေါ့ ! ကျွန်တော် ကတော့ လေဆိပ်တွေထဲမှာ အချိန်ပိုနေရင် ရေမွှေးဆိုင်တွေ ပတ်ကြည့် ! ပြီးရင် အနံ့စမ်းလို့ ရတဲ့ အထဲက ကြိုက်တဲ့ အနံ့ကိုစွတ်တယ် ။ လေယဉ် ပေါ်ရောက်ရင် ကိုယ့်ဘေးကလူအတွက် အနံ့ကောင်းအောင်လေ ! ဝယ်တော့ ဝယ်ဖြစ်ဘူးဗျ !
ပထမဆုံး ကိုယ့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ အရင်ကြည့်ပါ
ပြီးရင် နီးစပ်ရာ အလှကုန်စတိုးဆိုင် ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေမွှေးသီးသန့် ရောင်းတဲ့ဆိုင်မျိုးကို သွားပါ
ကိုယ့်ထဲပါတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ လောက်မယ့် ရေမွှေးပုလင်း သုံး၊လေး၊ငါးမျိုး ကို လိုက်ရှာပါ
တွေ့ ပြီဆိုရင်… အနံ့ အစမ်းပေးစွတ်လား ၊ ဒါမှမဟုတ် အဖုံးဖွင့်ပြီး အနံ့ ခံလို့ ရလား ဆိုတာကို မေးမြန်းပြီးမှ
စမ်းလို့ ရတဲ့ ရေမွှေးတွေထဲက ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးဟာ ကို ဝယ်လိုက်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ ရေမွှေးဝယ်ပုံဝယ်နည်း ပြီးပါပြီ
တော်ဝင်စင်တာ မြေညီထပ် မှာ ရေမွှေးသီးသန့် ရောင်းတဲ့ ဆိုင် တစ်ဆိုင် ရှိတယ် .. Testing လဲ ပေးသုံးတယ် … brand တော်တော် များလဲ တင်ထားတာ မို့ … ကျွန်တော် တော့ သဘောကျ မိတယ်ဗျို့  …
” ယောင်္ကျားလေးတွေ ပါးရိုက်ခံရ လိမ့်မယ်နော် ”
အသုံး အနှုန်း က ကြမ်းတမ်းလှချီလား ။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ၊
ပါးတစ်ချက် လာရိုက်မယ် ဆိုရင် ၊
ချက်ချင်း မဆိုင်းမတွ အဲဒီ မိန်းကလေး ကို ၊
လည်ထွက်သွားအောင် ပါး ပြန် ရိုက်ဘို့ ၊
နဲနဲလေးမှ ဝန်လေးနေမှာ နှောင့်နှေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား တန်းတူ အခွင့်အရေး ဆိုတာ ၊
ချစ်သူချင်း.. ရေမွေးပေးရင်.. ကွဲတတ်တယ်..ဘာညာဆိုတာတွေက.. မြန်မာပြည်က.. ပေါကြောင်ကြောင်.. အယူအဆတခုလို့ပြောချင်ပါတယ်..။
http://www.dgreetings.com › About Friendship › Friendship Gifts
Get Girlfriend Gift Idea to make your girlfriend feel really special. …aconsiderable period of time, then an ideal gift for your girlfriend would be perfume. … All these items have their individual meaning and when combined together createsa…
တိုက်ဖျက်စရာမလိုပါဘူး သဂျီးရယ် အခုခေတ်ဘယ်သူမှအဲလိုပြောတာမကြားဖူးဘူး
ရှိတယ် … ဇက်ကလေးရဲ့ .. ရှိတယ်…
ကိုအင်ဂျီး ကိုယ်တွေ့ …. ၁ယောက်တိတိ
(ဒါမိုးက အင်မတိ အင်မတန် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့
သဂျီး မို့ ပြောနိုင်တာ… တွေ့တယ်မလား ကြယ် ၄ပွင့်ပါရှို….)
ဘာတဲ့ … ရေမွှေးပုလင်းပေးမိရင်
အဲ့ ရေမွှေး သုံးရင်း ကုန်သွားသလို
အနံ့တွေ လွင့်ပျယ်သွားသလို .. အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး
အချစ်တွေ ပျယ်သွားမှာ မို့ တဲ့ …
ဘယ် စာရေးဆြာတွေ စခဲ့တဲ့ ဇာတ်လည်းတော့မသိ…
စီတုန်းပြောသလောက်တော့ … မစွန်းမရောက်ပေမယ့်
ပေးတယ် မဟုတ်အောင် … ၀ယ်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ …
ပိုက်ဆံ စတိ ပေးတာတို့ .. ရေမွှေးဖိုး နော .. ဆိုပြီး
မုန့်လိုက်ကျွေးတာ တို့ ..လောက် လုပ်လေ့ ရှိရဲ့ဗျာ …..
P.S တိုက်ဖျက်စရာ မလိုဝူး ..တိုက်ဖျက်စရာ မလိုဝူးဟူးဟူး..
ရေမွှေးပေးမိလို့ ..ရေမွှေးဖိုး ဆိုပီး ရိုမန်းတစ် ဒင်နာ ပြန်ကျွေးတာ ..
နည်းသလား ဂျ. …. သဂျီးတို့များ ..သများ ထမင်းအိုး ဒုတ်နဲ့ကို ထိုးတယ်..
သြော် .. ရေမွှေးနဲ့ထမင်းလဲစားတယ်လား
အယ်… ရိုမန်းတစ်ဒင်နာ ကို မသိရှာဘူးကိုး ..
ကျွတ် ..ကျွတ် …
ခုအရွယ်ထိ မိဘ ဒုက္ခပေးနေတာ ….
” ရိုမန်းတစ် ဒင်နာ ပြန်ကျွေးတာ ”
မောင်ဂီ ပြောနေပုံ အရဆိုရင်
ရိုမန်းတစ် ဒင်နာ ကို ဒဲ့ ဘာသာပြန်ရရင် ၊
ချစ်ဖွယ် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ညအခါ၌ ကျွေးသော ( ထမင်း မဟုတ် )
အဲလို အဓိပ္ပါယ် ရနေတယ် ။
FR ကြီးက ပြောတယ် ။
“…” ယောင်္ကျားလေးတွေ ပါးရိုက်ခံရ လိမ့်မယ်နော် ”
နဲနဲလေးမှ ဝန်လေးနေမှာ နှောင့်နှေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။..”
သေချာတာပေါ့……. ဖျောင်းကနဲ ပါးကို ပြန်ရိုက်ရုံတင် မကဘူး
ကြက်ဥကြိမ်လုံးကို ရေစွတ်ပြီး အဆီဘူးကို ဗျန်းဗျန်း မြည်အောင်…အာဟိ
စာရေးသူ အဆီဘူး…အဲလေ…..စီတုန်းကလဲ လူငယ်ဖြစ်ပြီး
အဲဒီလို ပေါကြောင်ကြောင် အယူအဆတွေကို လက်မခံပါနဲ့ ။
ရေမွေးပေးလို့ ရယ်မှ ကွဲတာ မဟုတ်ပဲ ကာယကံရှင်တွေ အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါကြောင်း….
ကျုပ်ကတော့ အမျိုးသားသုံး ရေမွှေး (Credit to S.L) သင်းသင်းကလေး ကို နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း
မှန်မှန်သုံးစွဲ ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးသုံးရေမွှေးကတော့ Lancome က ထုတ်တဲ့ Miracle ကို
အကြိုက်ဆုံးပါ ။ မိန်းမတွေနဲ့အလွန်လိုက်ဖက်တာကလား …..။
အဲဒီ ရေမွှေးဆွတ်ထားတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် အနားက ဖြတ်သွားရင် လည်ပြန် လှည့်မကြည့်ပဲ
မနေနိုင်ပါဘူး ။ ရေမွှေးဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘယ်တုန်းကမှန်း မသိတဲ့ မှတ်ညဏ်တွေကို
နှိုးဆွပေးသလို လိင်စိတ်ကိုလည်း အထွတ်အထိပ် ရောက်စေတယ် ။
ရေမွှေးချင်ရင် ရေဆူဆူမှာ ငံပြာရည်ခတ်ပါ၊ မွှေးလွန်းလို့ ဖြန်းယုံတင်မက သောက်ပါ သောက်မိသွားစေရမယ်။
အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုင်လားတော့ မသိဘူး
ငယ်တုံးက ကြိုက်တဲ့ အနံ့တွေ အခုသိတ်မကြိုက်တော့ဘူး
အခုတော့ Estee Lauder Beautiful အနံ့အီရှရှလေးသုံးဖြစ်သလို
BURBERRY LONDON CLASSIC အနံ့သင်းသင်းလေးကိုလည်း
ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ ရေမွှေးဝယ်ရတာ အဆင်ပြေလို့ အဲ့ဒီမှာ ၀ယ်ဖြစ်သလို
ကြောင်ကတိုးချီး အမွှေးဆုံးတဲ့ နိုဗွီကလေးကို ဦးကြောင်ကတိုး ဆယ်ပိသာတိတိ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ…။ ယူစေဗျာ…ဘွတ်….
မနောကတော့ ရေမွေးကိုစွတ်လေ့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ဆောင်ရတာတွေတော့တစ်ခါတလေ စွတ်ပါတယ်။ ရေမွှေးစွတ်ပြီးရင် အဲဒီအနံ့က ကိုယ့်ဆီပြန်ရနေတာကို မကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ဆောင်ရတဲ့ဗူးလေးတွေလည်း အများအားဖြင့် ခန်းရင်ခန်း၊ မခန်းရင်တော့ မောင်လေးတွေ လက်ချက်မိတာများပါတယ်။ ၀ါသနာပါရင်တော့ မဆိုးပါဘူး။ အနံ့သင်းသင်းတောင်သိပ်မစွတ်တာ ပြင်းရင်ပိုဆိုးတယ်။
PS : Si Tone က လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ စွတ်ဖြစ်မယ်ထင်တာပါပဲ။
ကိုယ်လိုလူမျိုး ရှိ သေး သကိုး ၊ မနောရေ မိုချို လည်း အဲဒီ လို ပဲ ရေမွှေး နံ့ ကို သူများ ဆီက တခါတလေ ရရင် ကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ့် ဆီ က အမြဲ ရ နေရင် ခေါင်း နောက် လာ သလို ပဲ။ အနား မှာ အမြဲတန်း နေမယ့် သူ ဆီ က ရလဲ မကြိုက်ဘူး ။ ရေမွှေး မသုံး ဖြစ်ဘူးဆိုပါတော့။
ဒီမှာ က ရေ မွှေးကို အကုန်စမ်း ကြည့် လို့ ရတယ်။ စာရွက် ရှည်ရှည် သေးသေး လေးတွေ မှာ ဆွက်ပြီး ကိုယ့် လက် ထဲထည့် ပေးတယ်။ ရှော့ ပင်း မော တွေ သွား ရင်းတခါ တလေ ရေမွှေးကောင်တာ တွေ ဘက် ရောက် သွား လို့ ပုလင်းလေး လှ လို့ ကိုင် ကြည့် လိုက် ရင် ကောင်တာ က ကောင် မလေး တွေက စာရွက်လေး ကို ဖျန်းပြီး ပေးလိုက် တတ် သလို ကိုယ့် ဘာသာ ကိုယ် လည်း tester လို့ ရေး ထားတဲ့ပုလင်း လေး တွေ ကနေ ယူ စမ်း လို့ ရသေး တယ်။ မို ချို ကတော့ တံဆိပ် ၄ ၊၅ မျိုး လောက်ရှူ ပြီး သွား ရင် ခေါင်းမူးသွား ရော။ အဲ ဒါကြောင့် ဈေး ကြီးပေး ပြီး ၀ယ်ဖို့ မပြောနဲ့ လက် ဆောင် လာပေး ရင်တောင်အကျိုး အကြောင်းပြောပြီး အတင်း ပြန် ပေးပစ်တာ။
နောက်ပြီး ဒီမှာ ကုလားတွေ သုံးတဲ့ အပေါစား ရေ မွှေး ဆိုင် တွေ လည်း နေရာ အနှံ မှာ ရှိ သေးတယ်။ ၁၀ ဖိုး ၃ ပုလင်းတို့ ၄ ပုလင်း တို့ ၊ တချို့ အနံ့ အရမ်း ပြင်း သလို ၊တချို့ လည်း သင်း ပါတယ်။ ဘုရား ရှိ ခိုး ရင် အမွှေး တိုင် ထွန်း လေ့ မရှိ တဲ့ အမေ့ အတွက် ဘုရား စင် ဖြန်းဖို့ နံသာဖြူ နံ့ တို့ ၊ စပယ် နံ့ တို့ ပါတဲ့ ရေမွှေး ပုလင်း တွေ တော့ အဲဒီ ဆိုင်တွေ က နေ ၀ယ် ပြီး မကြာ ခဏ ပို့ပေး ရတယ်။
ရီးစားကိုရေမွှေးပေးမိရင် အဲဒီရီးစားကောင်မလေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ
ဟာ ငါ့ ကိုယ်နံ့ံ ကိုဒီကောင်ကမခံနိုင်လို့နံတယ်ဆိုပြီးရေမွှေး
ဆွတ်ခိုင်းတာဘဲ လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် သွားတာလဲဖြစ်နိုင်ကြောင်း
အဲသလို သဘောထားညံ့ ဖြင်းသောမိန်းကလေးမျိုးဆိုလျှင်လည်း
ရေမွှေးမကြိုက်တဲ့သူ တစ်ထောင်မှာ တစ်ယောက်ရှိကောင်းရှိမှာပါ …
ကိုနိဂိမိ ပြောသလို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနားဖြတ် သွားလို့ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်း
လေး ရလိုက်ရင် တစ်ကြိမ်လောက်တော့ လှည့်ကြည့်မိတယ် …
မွှေးရနံ့သင်းသင်းလေးက အတော်လေးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာကလား …
အင်း … ဒါလဲ ဒုက္ခ များစွာထဲက တစ်ခု ပေကိုး ….။
အထက်က လူပြောတာကို သဘောတူပါတယ်
အော် ငါ့ဆီက များ အနံ့မကောင်းလို့ ရေမွှေးလက်ဆောင်ပေးလေသလားဆိုပြီး
ဖျောင်းဖျောင်း…နဲ့ အဆော်ခံနေရဦးမယ်။။ ဟဲဟဲ။
အနော်ကတော့ ပေးဖူးဘူး။( ကြော်ငြာစာ )
နာမည်ကြီးရေမွှေးဟုတ်မဟုတ် စစ်မစစ် ဘယ်လိုခွဲခြားကြလဲ သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပါဦး။ ဘရန်းဒတ်အိတ်တစ်ချို့တစ်လေကိုတော့ (Louis Vuitton, Prada, Gucci, Hermès) အင်လား ဘာလား နည်းနည်းပါးပါးခွဲခြားတတ်တယ်။ တစ်ချို့ဆို လူဝီဗီတွန်အိတ်အတုတရုတ်မိတ်ကြီးကိုင်ပြီး အစစ်ကိုဝယ်နိုင်သုံးနိုင်သယောင် ဟန်ဆောင်တာများတွေ့ရင် ရယ်ချင်တယ်။ ဒေါ်လာ၂၀ ၃၀တန်အတုကတော့ ချက်ချင်းတန်းကနဲခွဲခြားလို့လွယ်ပေမဲ့ ဒေါ်လာနှစ်ရာ သုံးလေးရာတန်အတုကိုခွဲတတ်ဖို့ကတော့ နည်းနည်းပညာလိုတယ်။
၀ယ်ပြီး ကျုပ်ဆီပို့ ပေးလိုက် စစ်မစစ် ခွဲခြားပေးမယ်
ညည်းဆီမှာ စစ်မစစ်သိဖို့ ၀ယ်ပြီးပို့မနေတော့ဘူးအေ။ ကိုယ့်ဘာသာပဲ အွန်လိုင်းမှာ ဘရန်းရေမွှေးစစ်မစစ်ဘယ်လိုခွဲလည်း ရှာဖတ်တော့မယ်။
အိပ်တွေကတော့.. လူဝီဗီတွန်တို့..ပါရဒါ၊ဂူစီတို့က.. ၈၀-၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်..အတုတွေတဲ့..။
ဂျပန်ကိုသွင်းနေတဲ့သူများ.. သူသိတယ်ဆိုပြီး.. တိုကျိုမြို့ထဲ..ထိုင်.. လွယ်လာတဲ့သူတွေအိပ်ကြည့်ပြီး.. ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပြနေတာ…
အဲဒီ တံဆိပ်တွေ တရုတ်ပြည်မှာ သိပ်ပေါတယ်.. ပေါတယ် ဆိုပေမဲ့ အထင်သိပ်မသေးနဲ့နော်.. သူက A B C Grade အဆင့်ခွဲပြီး ရောင်းတာ.. ဈေးကလည်း နိုင်ငံခြားသားဆို အသေ ဆော်တာ.. အစစ်နီးပါး တူတဲ့ ဟာဆို သူတို့လည်း ဈေး ဆော်လို့ ဈေး အရမ်းဆစ်ရတယ်။ အတု နဲ့ အစစ် က အရမ်းဈေးကွာတယ်လေ.. တော်ယုံ ဆို မသိနိုင်တော့ အနောက်တိုင်းသားတွေ တရုတ်ပြည် ရောက်ရင် အဲဒီ ဆိုင်တွေက သဘောကျနှစ်သက်စွာ ၀ယ်နေကြတာ တွေ့မိတယ်။
တရုတ်ကလူဝီဗီတွန်အတုကို အနောက်တိုင်းသားတွေဝယ်တယ်ဆိုလို့ ဘယ်နိုင်ငံသားတွေပါလိမ့်။ အမေရိကားကလား၊ ကနေဒါကလား၊ လက်တင်အမေရိကကလား။ ဥရောပသားတွေတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်ဖြင့် များသောအားဖြင့် ဥရောပသားတွေက သိုသိပ်တယ်၊ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်နည်းတယ်၊ ကွာလတီအကောင်းစားကိုပဲသုံးပြီး အတုဆိုလုံးဝလုံးဝမသုံးပါ။ လူဝီဗီတွန်တို့ ပရဒါတို့ ဂူချီတို့ဆိုတာက ဥရောပကထွက်တာဆိုပေမဲ့ အဓိကဈေးကွက်က အာရှကသူတွေကိုဦးတည်ပါတယ်။ အာရှမှာ(အထူးသဖြင့်တရုတ်လူမျိုးချမ်းသာတဲ့သူတွေ) အိတ်ဆိုလူဝီဗီတွန်ကိုင်မှ နာရီဆိုရိုးလက်စ်ပတ်မှ ဂုဏ်ရှိတယ်ထင်တတ်ကြတာကိုး။ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် အောဖစ်ရှယ်လူဝီဗီတွန်ဆိုင်မှာ ဈေးဝယ်တဲ့သူ၈၀%လောက်က တရုတ်တွေချည်းပဲ။ သူများတွေစီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကတောင် စင်္ကာပူကလူဝီဗီတွန်ဆိုင်ရှေ့မှာ ဈေးဝယ်ဖို့တရုတ်တွေတန်းစီနေတာ။
သာမန်ထက်သာတဲ့လူဝီဗီတွန်အတုကိုခွဲဖို့တော့ ပညာလိုတယ်။ gradeတွေဘယ်လိုပဲခွဲထားထား အိတ်ရဲ့ချုပ်သား၊ သားရေ၊ အနံ့၊ အတွင်းကပစ်စည်းအမျိုးအစားကွာလတီ၊ အိတ်မှာသုံးထားတဲ့ သတ်ထု(ရွှေအစစ်နဲ့အခြားသတ်ထုတစ်မျိုးရောထားတယ်) နောက်ရှိသေးတယ်။ လက်တွေ့ပြမှပိုမြင်သာထင်သာရှိတာမို့ မရေးတော့ဘူး။
လူဖြူတွေ ဈေးဆစ်ပြီး ၀ယ်နေတာ တွေ့တာပဲ.. ဘယ်နိုင်ငံက လူလဲလို့ သွားတော့ မမေးမိလိုက်ဘူး။
သူတို့ပြောတဲ့စကား လေယူလေသိမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ရင် ဘာလူမျိုးလဲဆိုတာ သာမန်အားဖြင့် အကဲခတ်နိုင်မှာပါ။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။ ပြင်သစ်စကားပြောတဲ့လူဖြူတိုင်း ပြင်သစ်လူမျိုးလူဖြူမဟုတ်သလိုပေါ့။ ဘယ်လ်ဂျီယန်လည်းဖြစ်နိုင်သလို ဆွစ်လူမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ကနေဒီးယန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မို့ပါ။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအစစ်ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်သံထွက်လေယူလေသိမ်းနဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး၊ သြစတြေးလျန်းလူမျိုးတွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်လေယူလေသိမ်းကွဲသလိုမျိုးပေါ့။ လူဖြူတိုင်းလည်း အနောက်တိုင်းသားမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ရုရှန်းတွေ။
မဆူးရေးတာကိုကြည့်ပြီးမဆူးစိတ်ကိုမှန်းကြည့်ရရင် မဆူးကအမျိုးချစ်စိတ်အတော်ပြင်းပုံပါပဲ။ လူမျိုးခြားတွေကို ယေဘုယျခြုံပြီးပြောတတ်တာကိုကြည့်ရင် ကိုယ့်လူမျိုးတောထဲမှာနေရတဲ့အချိန်ပိုများတဲ့ပုံမို့ပါ။
ပြင်သစ် (တိုးဂိုက် နဲ့ က ရိုက်ဖော်ရိုက်ဖက်) က လာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ က ပုဂံက ဆိုင်မှာ ယွန်းထည် တို့ တခြား လက်ဆောင် ပစ္စည်း တွေ တို့ နဲ့ သူတို့မှာ ပါလာတဲ့ ရေမွှေးတို့ နာရီ တို့ မျက်မှန် တို့ နဲ့ လဲပါတယ်။ အဲ့ ဆိုင်တွေက လဲ.. အဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အောက်ဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းပါတယ် … အဲ့မှာ ဖြစ်ချင်တော့ .. ကိုယ့် အရှေ့  တင် လဲ နေတာ မို့ ဆိုင်ရှင် က လဲ ဓာတ်သိ မို့ ရေမွေးလေး ယူကြည့်တော့ ဂျော်ဂျီယို အာမနီ လဲ ဖြစ်နေလေတော့ ပြန်ဝယ်မယ် လဲ စိတ်ကူးတာ ပါတယ်။ အဲ့မှာ .. အဲ့ဒါက အတု ဖြစ်နေတာ တွေ့တယ်ဗျို့  ….။
အဲ့ဒီတော့ ဘယ်နိုင်ငံ မှာနေနေ .. လူက တော့ လူပါပဲဗျာ ..အတု သုံးတဲ့ သူရှိသလို မသုံးတဲ့ သူလဲ ရှိနိုင်ပါတယ် …။ တတ်နိုင်တဲ့ တနေ့ .. အဆင်ပြေ တဲ့ တနေ့ .. ကျုပ်အဖို့ လဲ အကျိုးအမြတ် တစ်ခုခု ရနိုင်မယ် ဆိုရင် .. သက်သေ ပြ လိုက်ချင် ပါသေးတယ် …
အဘ အမြင်လေး ပြောရရင်ဖြင့် ၊
မြန်မာတွေက အနောက်နိုင်ငံသား လို့ခေါ်ကြတဲ့ Caucasian တွေကို ၊
အတွေးအခေါ် ၊ နည်းပညာ ၊ တရားမျှတမှု တွေမှာ အထင်ကြီးပေမယ့် ၊
ဥစ္စာဓန ရှာဖွေမှု ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အပိုင်းမှာတော့ အထင်မကြီးပါဘူး ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အဘ နှင့် China Tour အတူ သွားကြတဲ့ အဖြူတွေ က ၊
အဲဒီ ဘာမဟုတ်တဲ့ စရိတ်လေးကို ရဖို့ သူတို့တွေ တစ်နှစ်လုံး ၊
တော်တော် စုယူရတယ် လို့ပြောကတည်းက ၊ အံ့သြနေတာပါ ။
သြော် ၊ သြဇီတွေပဲ ပိုက်ဆံ မရှိတာလား ဆိုပြီး ၊
ဥရောပ ဖက် လှည့်ကြည့်တော့ ပိုဆိုးပါသေးဗျာ ။
အခု လောလောဆယ် ပဲရစ်မှာ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊
ဖွင့်ပွဲသွားကြတဲ့ ကျောင်း အလှူရှင် အဘ မိတ်ဆွေတွေ ခမျာ ၊
ဥရောပမှာ အခိုးခံရ ၊ အနှိုက်ခံရတာ ဝက်ဝက်ကို ကွဲနေတာပဲ ။
ပြင်သစ် နှင့် စပိန် အကြား လမ်းမှာ ကားရပ်ပြီး လျှောက်ကြည့်တာ ၊
ခရီးဆောင်အိတ် ၄ လုံး ကားသော့ဖွင့်ပြီး အခိုး ခံရတယ် ။
စပိန် ၊ ဘာစီလိုနာ လည်း ရောက်ရော ၊
ပုလိပ် ဟန်ဆောင်ပြီး ၊ ဟိုစစ် ဒီစစ် လုပ်ရင်း ခါးပိုက်နှိုက် လုပ်သွားတာ ၊
နောက်ထပ် ယူရို ၃၀၀၀ ကျော် ထပ်ပါသွားတယ် ။
အဘ တောင် ဥရောပ Tour သွားရမှာ ခပ် လန့်လန့် ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ၊ ဥရောပ က ( အရမ်းမွဲနေပါပြီ ) အရမ်းမွဲနေပါပြီ ။
နောက် ဆယ်နှစ်လောက်ဆိုရင် အဖြူတွေ ၊
ရန်ကုန်မှာလာပြီးများ ဆိုက်ကား လာနင်းကြမလား မသိ ။
အခုနောက်ပိုင်း တကယ်ချမ်းသာလာတာက တရုတ်တွေပါ ။
Sydney က Fish Market မှာဆို အားရပါးရ စားသောက်နေကြတာ ၊
၇၅ % လောက်က တရုတ် Tourist တွေချည်းပဲ ။
ပြင်သစ်ကလာတိုင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဆိုတိုင်း ပြင်သစ်လူမျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျမကဆွစ်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီဆိုပါစို့။ ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့root(သို့)originက ဗမာပါပဲ။ ဒါကိုဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ..အာဖရိကန်စပ်တစ်ယောက် ပြင်သစ်မှာမွေးလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားရင်တောင် အာဖရိကန်သွေးပါတာကို ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြူနဲ့ပဲရောရော အ၀ါနဲ့ပဲရောရော အညိုနဲ့ပဲရောရော သူတို့ရဲ့ဆံပင်သားကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒါဟာ အာဖရိကန်သွေးပါတဲ့သူမှန်း တန်းသိနိုင်တာမို့ပါ။ လိမ်လို့ ဖုံးကွယ်လို့မရပါ။
လူမျိုးတစ်မျိုးအကြောင်းကိုဝေဖန်တော့မယ်ဆိုရင် သူတို့နေတဲ့နေရာမှာ အတော်အနေကြာမှ..ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကြားထဲလူရာဝင်တဲ့သူဖြစ်မှ(လူရာဝင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အပေါ်ယံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက် ကိုယ့်ရဲ့open-mindedဖြစ်မှု၊ ကိုယ့်ရဲ့attitude၊ ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ကိုယ်ကknowledgeableဖြစ်မှု စတာစတာတွေ) တီးမိခေါက်မိနိုင်တာပါ။သူများအပြောနဲ့ပဲဖြစ်စေ..ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုတစ်လေအရဖြစ်စေ တစ်ဖက်သားကို သိမ်းကျုံးပြီးကောက်ချက်ချတာမျိုးကတော့ တရားမျှတမှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်လောက်နဲ့ လူအနည်းစုလောက်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကလူအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။
ကျမမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဥရောပကနေအာရှကို တစ်နှစ်ကို ၂ခါလောက်ခရီးထွက်ပါတယ်။ ခရီးတစ်ခါထွက်တိုင်း ၁လအနည်းဆုံးကြာပါတယ်။ တစ်လကြာမိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့ခရီးဟာ စရိတ်မနည်းနိုင်တဲ့အတွက် ခရီးမထွက်ခင်ပိုက်ဆံစုတာ မထူးဆန်းလောက်ပါဘူး။ ကျမမိတ်ဆွေမှာ ဒေါ်လာမီလီယန်နဲ့ချီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု(အိမ်၊ မြေ၊ အမွေ၊ ဘဏ်စုငွေ)တွေရှိပေမဲ့ permanent jobမဟုတ်တော့ ပုံမှန်လစဉ်ဝင်ငွေမရှိတာကြောင့်ရယ်၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တဲ့ သူတို့ထုံးစံကြောင့်ရယ် ခရီးသွားဖို့ပိုက်ဆံသပ်သပ်ကိုစုလေ့ရှိတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
မကြောက်ပါနဲ့အဘရယ်။ ကျမအဲဒီကနိုင်ငံတွေဆီ ၁နှစ်ကို၂ခါအမြဲလိုလိုအလည်သွားနေပါတယ်။ ပြင်သစ်၊ သြစတြီးယား၊ အီတလီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယန်။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။ ဂျီနီဗာလို နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့မြို့ကြီးလိုမျိုးကတော့ crimeများတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဒေသန်တရဗဟုသုတရှိထားရင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
“အခုနောက်ပိုင်း တကယ်ချမ်းသာလာတာက တရုတ်တွေပါ ။
Sydney က Fish Market မှာဆို အားရပါးရ စားသောက်နေကြတာ”
” မကြောက်ပါနဲ့အဘရယ် ”
ဟင့်အင်း ၊ ဟင့်အင်း ၊ မရဘူး ၊ ကြောက်တယ် ။
PEACEMAKER ကသာ မကြောက်နှင့်ပြောတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၆ ရက်နေ့က မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ မြတ်ခိုင် လည်း ၊
ဗီယင်နာ ဘူတာမှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရလို့ ၊
ကျနော်က တယောက်စ နှစ်ယောက်စ ၊
ကြားစကားနှင့် ပြေတာ မဟုတ်ဘူး ။
သင်္ဘောသား သူငယ်ချင်းတွေ ခံပေါင်းများလှပြီ ။
စပိန် ဆို ပိုဆိုးသေး ၊ အိတ်ကို လက်လွှတ်လို့ကို မရဘူးတဲ့ ။
အိတ်ချ ဟိုဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး ၊
ဒီဖက် ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် မရှိတော့ဘူးတဲ့ ။
ဥရောပက မြန်မာပြည် ထက် ၊
ခါးပိုက်နှိုက် နှင့် သူခိုး ပိုများတယ် ပြောတယ် ။
မရဘူး ၊ ကြောက်တယ် ။
သူကဗီယန်နာဘူတာမှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့ ဘူတာမှာလူတွေကရှုပ်နေ၊ အတော်များလို့လား? သူက ဂျာမန်စကားပြောတတ်လား။ အဖော်ပါလားဘေးမှာ။
ကျမအဲဒီကိုရောက်တုန်းကတော့ တစ်မြို့လုံးကိုအနှံ့သွားခဲ့တယ်။ ၄ညကြာနေခဲ့တယ်။ ရထားတော့မစီးခဲ့ဘူး။ ကားနဲ့ပဲ နေရာအနှံ့သွားခဲ့တယ်။ ကားပါကင်ခကတော့ အသေဈေးကြီးတယ် အဘရေ။ အဲဒီကိုလာလည်တဲ့သူတွေ၉၅%လောက်က လူဖြူအသက်ကြီးပိုင်းတွေများတယ်။ သီရေတာတို့ဘာတို့ကရှယ်ပဲဆိုတော့ အသက်ကြီးပိုင်းတွေအလာများတဲ့နေရာပါပဲ။ ကျမတို့အရွယ် ခရီးသွားထဲမှာမတွေခဲ့ရသလောက်ပဲ။ အာရှကလူဆိုရင် ဂျပန်တွေကိုတော့ တွေ့လိုက်တယ်။ ဂျပန်စကား ကျမအသင့်အတင့်နားလည်လို့ ဂျပန်တွေမှန်းသိတာပါ။ ကျမရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံလေးကနေ သြစတြီးယားဗီယန်နာကိုအသွား လမ်းကရှိသမျှ တွေ့သမျှမြို့တွေအားလုံးကို ၀င်လည်ခဲ့သေးတယ်။ ဂီတပညာရှင်ကြီးမိုးဇက်ကိုတော့ အဘအကျွမ်းတ၀င်သိမှာပါနော်။ သူ့မြို့ကလေးကိုတောင် ၀င်လည်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အင်မတန်ကိုလှတဲ့မြို့လေးပါ။ လာလည်တဲ့ခရီးသွားတွေလည်းအများကြီး အများကြီးပါပဲ။
“သင်္ဘောသား သူငယ်ချင်းတွေ ခံပေါင်းများလှပြီ။
စပိန် ဆို ပိုဆိုးသေး ၊ အိတ်ကို လက်လွှတ်လို့ကို မရဘူးတဲ့”
သဘောင်္သားတွေသွားလေ့သွားထရှိတဲ့နေရာမျိုးနဲ့ တူးရစ်တွေသွားလေ့ရှိတဲ့နေရာက သာမန်အားဖြင့် မတူဘူးလေ..ဆိုတော့ကာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပင်းလိုနိုင်ငံမှာတောင် သင်္ဘောသားတွေ taxiစီးတုန်း အနုကြမ်းစီးခံရတာ ခဏခဏပဲလေ။
မွန်မွန့်လိုလူတော့ ရှိမယ်မထင်ဘူး… မွန်မွန်က အနံ့ကိုမရတာ… တော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့အနံ့ကလွဲလို့ ဘာနံ့မှ မရဘူး။ အနံ့ခံအာရုံချွတ်ယွင်းတယ်ပဲ ပြောရမလားမသိဘူး..တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ခပ်ကောင်းကောင်းပဲ..
စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ရေမွှေးသုံးတယ်… သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူသွားဝယ်ရတာပေါ့…
ကျုပ်က တစ်ခါတစ်ခါမှ ရေမွှေး သုံးတတ်တဲ့ လူပဲဗျ ..
မွန်မွန်က အနံ့ မရတတ်ဘူးဆိုလို့ပါ ..
အော်..ဘူလဲလို့…ယနေ့ပို့စ် ကို ဖွင့်တော့မှပဲ သိတော့တယ်… လူဇိုး…
ကို FR အတွက်ပါ…..
(ယောင်္ကျားလေးနဲ့မိန်ကလေး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားရင် ဘယ်တော့မှ
လိမ့်မယ်နော်…. ) Si Tone ပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ….
ယောင်္ကျားလေးက မိန်းကလေးကိုရေမွှေး ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်…. အဲဒီမိန်ကလေးရဲ့ အနံ့အသက်ကို
သဘောမကျလို ဆိုပြီး ထင်သွားမှာလေ…. အဲဒါကြောင့်ပါ…..
ယောင်္ကျားလေးဖက်က စိတ်သန့်သန့်ပေးပင်မဲ့ မိန်းကလေးက အဲလိုထင်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲ…
Si Tone စာရေးတာ အမှားပါ ရင်ခွင့်လွတ်ကျပါနော်………. ပီတော့ အားလုံးကိုလဲကျေးဇူတင်ပါတယ်
Si Tone လေးရေ ..
အဘဖော ကလေရော၊ အခြားသူတွေရောပေါ့နော် …
သူတို့က အမြင်မတော်တာတွေ့လို့ ပြောကြ၊ ဆိုကြတာပါကွယ် …
Si Tone လေးဂ ခုလို ကိုယ့်ဆိုလိုရင်းကို ပြန်ရှင်းပြလိုက်တော့လည်း ပီးတွားဒါပေါ့နော် ..
သူရို့က si tone သုံးထားတဲ့ စကားလုံးကို အဲ့လို မသုံးနှုန်းသင့်ဘူးလို့ ထောက်ကြဒယ် ..
Si tone ဘက်ကလည်း ဘာကြောင့် အဲ့လို သုံးတယ်ဆိုပြီး ရှင်းပြတယ် ..
ဒါကို ကြည့်ရင် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ကြတဲ့ ပုံစံများ သက်ရောက်နေမလားပဲ .. (အထင် .. ခွက်ဒစ်တူ စိန်ဗိုက်ဗိုက်)
ပြီးဒေါ့လည်း ငြင်းခုန်ခြင်းဟာ အနုပညာတစ်ရပ် .. တဲ့ ..
ဒါက သဂျီး ပြောဒါ …
ရေမွှးကိုရွေးရင် ကိုယ် အရမ်းကြိုက်တဲအနံ့ကိုမရွေးရဘူးလို့ကြားဖူးတယ်။
ရေမွှေးရဲ့သဘောတရားက မိန်းကလေးတွေဆွတ်တဲ့ ရေမွှေးအနံ့ဟာ (လွယ်လွယ်ပြောကြပါစုိ့) အထီးများကြိုက်နှစ်သက်သော၊အထီးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်သော အမတွေထံမှထွက်သော အနံ့မျိုးကိုဖော်စပ်ထားသလို၊ ယောင်္ကျားလေးများသုံးတဲ့ရေမွှေးဟာလဲ ဗိုက်စီဗိုက်စာပေါ့ဗျာ။
အဲဒါမှ ဖိုနဲ့ မ အပြန်အလှန် ရနံ့နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိမှာပါ။ ဆိုတော့ ကျားများအရမ်းကြိုက်တဲ့အနံ့ဟာ မများကကျားကိုဆွဲဆောင်ဖို့ သုံးရမဲ့အနံ့ဖြစ်သလို မများအရမ်းကြိုက်တဲ့အနံ့ဟာ ဗိုက်စီဗိုက်စာပေါ့ဗျာ။
ဒါကြောင့် ဖော်မန်းဆိုပြီး ထုတ်ထားတာလို့ ကြားဖူးပါကြောင်း။
နံတဲ့အနံ့ထွက်တာ မကြိုက်သလို မွှေးနေတာကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။
ဘာအနံ့မှမထွက်ပဲ သန့်ပြန့်နေတာမျိုးကို ကြိုက်တယ်။
(ကိုယ်တိုင်တော့ ငါးပိငါးခြောက်နံ့ နံနေတတ်လို့ ရေမွှေးကလည်း မသုံးတတ်တာနဲ့ လူအများကြားထဲသွားရင် အမြဲလိုလို အားနာစရာဖြစ်နေတတ်တာပဲ။)
ကျုပ်ကတော့ ရေမွှေးဆိုတာ သူများအတွက်ဆွတ်ရတဲ့ဟာလို့ ယုံကြည်ထားသကိုး..။
အဲ့ဒါကြောင့် အနံ့ပျော့တဲ့ဟာဆိုရင် ပုခုံးမှာဆွတ်ပြီး
တကယ်တော့ ဘယ်မှာဆွတ်ဆွတ် ကျုပ်ကိုယ်နဲ့အ၀တ်အစားကထွက်တဲ့အနံ့က ဖုံးလွှမ်းထားတာပါပဲ..။
Miss Dior Cherie အနံ့ လေးကို ကြိုက်တယ် …. ။ ရုံးတတ်တဲ့ နေ့တွေဆို အသည်းသန်ချည်းပြေးနေရတာမို့ ရေမွှေးဆွတ်ဖို့ တပတ်ကို လေးရက်လောက်မေ့နေတတ်တယ် … ။
သေချာအချိန်ရလို့ ပြင်ဆင်ရလျှင်တော့ …အမြဲသုံးဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ စွဲသုံးပေမယ့် … သူများဆီက ၊ သိပ်မပြင်းတဲ့ အနံ့ လေးရလျှင် ဘာသုံးဖြစ်လဲ လိုက်မေးကြည့်မိတယ် ။ မေးတာပဲရှိတာ ပြောင်းမသုံးဖြစ်ဘူး ။ ရေမွှေးကြောင့် စိတ်အာရုံတွေနိုးဆွစေပြီး … လန်းဆန်းသလိုလည်း ခံစားရလို့သုံးဖြစ်ပါတယ် ။
ဘယ်သူကဘာပေးလို့ ကွဲတယ်ဆိုတဲ့ အယူကိုတော့လက်မခံပါဘူး … ။